Jabuuti oo ciidamo & saraakiil sarsare oo dheeraad ah u direysa Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jabuuti oo ciidamo & saraakiil sarsare oo dheeraad ah u direysa Soomaaliya
Jabuuti – Mareeg.com: Jamhuuriyadda Jabuuti, ayaa shaacisay inay si degdeg ah ciidammo iyo saraakiil sar-sare u dirayso Soomaaliya, si ay u xoojiyaan ciidammada halkaas hore uga joogay ee qaybta ka ahaa hawlgalka AMISOM.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa sheegtay inay ciidamo dheeraad ah u soo dirayso Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan ciidamada ka jooga Soomaaliya oo ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, kuwaasoo ay sheegtay inay qayb muhiim ah ka qaadan doonaan sugidda ammaanka dalka Soomaaliya iyo la-dagaallanka lagula jiro Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dawladda Soomaaliya iyo xulufadeeda.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa hadalkan ka sheegay shir uu la qaatay wafdi ka socday Golaha Ammaanka iyo Nabad-galyada Midawga Afrika oo booqasho ku jooga Jabuuti.
Sida ay qortay wakaaladda wararka Antolia ee dalka Turkiga, sarkaal u hadlay madaxtooyadda Jabuuti ayaa u in dowladdiisu ay Soomaaliya u diri doonto ciidammo dheeraad ah iyo saraakiil caawinaya, kuwaasoo qayb ka noqon doona howlgalka AMISOM.
“Waxaan go’aansannay in saraakiil sare iyo cidammo Jabuutiyaan ah aan u dirno Soomaaliya si ay cidammadayda u caawiyaan” ayaa lagu qoray war kazoo baxay madaxtooyada Jamhuuriyadda Jabuuti.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalooyinka Baledweyne iyo Buulo-barde ka joogaa ilaa 1000 askari, kuwaasoo dagaal kula jira Alshabaab.
← Nairobi: Gaari ku qaraxay saldhiga booliska Pangaani ee ku dhow xaafadda Islii → Madaxweynaha maamulka Puntland oo u ambabaxay Itoobiya